ညီလင်းသစ်: March 2009
Canon EOS450d, 173mm, f/10, 1/400, ISO200
Canon EOS450d, 134mm, f/8, 1/200, ISO200
Canon EOS450d, 200mm, f/8, 1/320, ISO200
Canon EOS450d, 96mm, f/13, 1/500, ISO200
Canon EOS450d, 63mm, f/11, 1/250, ISO200
Canon EOS450d, 115mm, f/10, 1/400, ISO200
တလောဆီက လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံအချို့ပါ၊ ဆောင်းတွင်းရောက်ရင် ဒီစင်ရော်တွေက နှစ်တိုင်းဆောင်းခိုဖို့ ဝင်လာလေ့ ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာ လူတွေက သူတို့စားမကုန်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေ လာ,လာကျွေးရင်း ဒီကောင်တွေအဖို့တော့ အချစ်နဲ့ပေါင်မုန့်နဲ့ ဟန်ကိုကျနေတာပေါ့၊ နဂိုကတည်းက ရှိနေတဲ့ ဘဲတွေ၊ငန်းတွေက နှေးနှေးကွေးကွေးတွေ ဆိုတော့ သွက်လက်တဲ့စင်ရော်တွေပဲ အရင်စားရလေ့ရှိတယ်၊
အခုလည်း မအိမ်သူနဲ့ သားလေးနဲ့ သူတို့ကို အစာကျွေးနေတုန်း ကျနော်လည်း ကင်မရာမှန်ဘီလူး စမ်းဖို့အခွင့်အရေးကို မလွတ်တမ်းယူ လိုက်တယ်၊ အရင်တစ်ခေါက်ကလည်း ဒီလိုမျိုး ရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းကတော့ အခြား Lens တစ်ခုနဲ့၊ အခုပုံတွေ အားလုံးကိုတော့ Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS မှန်ဘီလူးနဲ့ ရိုက်ပါတယ်။
Posted by ညီလင်းသစ် au 25.3.097comments
ဒီခပ်ရှည်ရှည်နဲ့ နာမည်ဆန်းတဲ့ စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်က ၁၃ရက်ကျရောက်တဲ့ သောကြာနေ့ကို ကြောက်သူပါ၊ မူလက ဂရိစကားလုံးဖြစ်တဲ့ ဒီနာမည်ဟာ အယူသည်းသူတွေ ကြားမှာတော့ အတော်တာသွားတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးပါပဲ၊ တော်ရုံအယူသည်းမှုတွေ မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာတောင် ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ဟာ သောကြာနေ့ဖြစ်နေခဲ့ရင် စိတ်ထင့်တဲ့လူတွေ အတော်များပါတယ်၊ ဒီနေ့ဟာ ၁၃ရက်ကျတဲ့ သောကြာနေ့ပါပဲ၊
အများသိကြတဲ့အတိုင်း ၁၃ ဂဏန်းဟာ မကောင်းတဲ့အတိတ်ကို ဆောင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်၊ ဒီအယူအဆ ဟာ အနောက်တိုင်းမှာဆို ပိုများမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဟိုတယ်တွေမှာ ၁၃ ထပ်မြောက် မရှိတာ၊ အခန်းနံပါတ် ၁၃ မရှိတာ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာ ၁၃ တန်းမြောက်ထိုင်ခုံ မရှိတာ...၊ အများကြီးပါပဲ၊ ၁၃ ဂဏန်းဟာ နမိတ်မ ကောင်းဘူးလို့ ဖြစ်လာစေတဲ့ ဇတ်လမ်း၊ အဖြစ်အပျက်၊ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးပါ၊ လူသိအများဆုံးက တော့သခင်ယေရှုနဲ့ သူ့ရဲ့ တပည့်တော် ၁၂ ပါးညစာ စားတဲ့ညမှာ သခင်ယေရှုကို ရောမစစ်သားတွေလက် အပ်လိုက်တဲ့ တပည့်တော် ယုဒရှကာယုတ်ဟာ ၁၃ ယောက်မြောက် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပါ၊ ၁၃ ယောက်မြောက်ဖြစ် တဲ့သူဟာ သတင်းဆိုးကို သယ်ဆောင်လာတယ်၊ သစ္စာဖောက်ဖြစ်တယ်၊ အကုသိုလ်နမိတ်ဆိုးတွေ သက်သက် သာဆောင်ကြဉ်းလာတဲ့ တပည့်တော်ပါပဲ၊ ဒီကမှတဆင့် ဒီနေ့ခေတ်အထိ အယူသည်းလွန်းသူ တချို့ဆိုရင် ထမင်းဝိုင်းမှာ လူ ၁၃ယောက်မဖြစ်အောင် ရှောင်တယ်၊ မတော်တဆ ၁၃ ယောက်မြောက်ဧည့်သည် ရှိလာခဲ့ ရင်အဲဒီလူဟာ ကျန်တဲ့လူတွေဆီ နမိတ်ဆိုးတွေ သယ်လာပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘေးဒုက္ခရောက်လေ့ ရှိတယ် လို့ယူဆကြတယ်၊ စကင်ဒီနေးဗီးယား နိုင်ငံတွေမှာတော့ နတ်တွေညစာစားပွဲ ဆင်ယင်နေတုန်း မဖိတ်မခေါ်ဘဲ နဲ့ဝင်လာတဲ့ ၁၃ ပါးမြောက်နတ်ဟာ နတ်ဆိုးဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလည်း ထင်ရှားပါတယ်၊
သောကြာနေ့...၊ သောကြာနေ့ကတော့ သခင်ယေရှုကို ကားတင်ရာနေ့ဖြစ်လို့ အကုသိုလ် ဖြစ်ပွားရာနေ့၊ ဝမ်း နည်းခြင်း ကျရောက်ရာနေ့၊ ပျက်စီးသေဆုံးရာနေ့ အဖြစ်နဲ့ နမိတ်မကောင်းတဲ့ နေ့အဖြစ် ယူဆကြတယ်၊ နောက်ပြီး အလယ်ခေတ်ကာလက ဥရောပမှာ ရာဇဝတ်သားတွေကို ကွပ်မျက်ရင် သောကြာနေ့မှာ ကွပ်မျက် လေ့ရှိတယ်၊ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်မှာ အကျပိုင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ သောကြာနေ့ကို ပျက်စီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သေ ဆုံးခြင်းတွေနဲ့ တွဲမြင်ခဲ့ကြတယ်၊ (ရုံးသမားတွေ သောကြာနေ့မှာ ပျော်တာကတော့ တပိုင်းပေါ့လေ-)၊
အဲဒီလို နမိတ်မကောင်းပါဘူး ဆိုတဲ့ ၁၃ ရက်နဲ့ သောကြာနေ့တို့ တထပ်တည်းကျတဲ့ အခါမှာတော့ အယူသည်း သူတွေဆိုတာ နေစရာနေရာတောင် မရှိတော့ပါဘူး၊ စစ်တမ်းတချို့အရ ဒီလိုရက်မျိုးမှာ အပြင်ထွက်ရင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှာ ကြောက်လို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး အလုပ်မလာတဲ့ လူတွေက ကျန်တဲ့ သာမန်အချိန်တွေမှာ ထက် ပိုများပါတယ်-တဲ့၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေကလည်း ဒီလို ၁၃ ရက်၊ သောကြာနေ့ဆိုရင် ခရီးသည် သိသိ သာသာကြီး နည်းသွားတာ ဖော်ပြကြတယ်၊ ဒီလိုရက်မှာ လေယာဉ်ပျက်ကျဖူးတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့တာ ကိုး၊ မယုံတဲ့သူတွေက တိုက်ဆိုင်မှုလို့ ပြောမှာဖြစ်သလို ယုံတဲ့သူတွေအဖို့လည်း ထပ်ပြစရာ သက်သေ၊ အထောက်အထားတစ်ခု ထပ်တိုးမှာပါ၊
ဒီနှစ်ထဲမှာ ၁၃ ရက်နဲ့ သောကြာနေ့ထပ်တာ ၃ ကြိမ်ရှိပါတယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်နဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ ဖြစ်တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ သောကြာနေ့တုန်းကတော့ ရုံးက သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော် လျှောက်နောက်နေမိ တယ်၊ ကော်ဖီဖျော်ရင်း ဇွန်းလွတ်ကျတဲ့သူကို အဲဒါ ဒီနေ့က ၁၃ရက် သောကြာမို့လို့၊ ပရီဇင်န်တေးရှင်း လုပ်ရ မယ့်တစ်ယောက်ကို မင်းတော့ အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်မှာပဲ..ဒီနေ့ ၁၃ရက် သောကြာနေ့ကွ..၊ စသဖြင့်ပေါ့၊
အိမ်ရောက်တော့ သတင်းမှာ နယူးရောက်ပြည်နယ်မှာလေယာဉ်ပျံပျက်ကျတဲ့ အကြောင်းကြားရတယ်၊ အဲဒီ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ World Trade center တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ယောင်္ကျားဆုံးသွားလို့ မုဆိုးမ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး လည်းအသက်ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ရှာတယ်၊ ဒုတိယမြောက် ပြိုကျခဲ့တဲ့ World Trade center ရဲ့ ၁၀၅ထပ် မှာအလုပ်လုပ်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူ့ယောင်္ကျားရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပပေးဖို့ အသွားမှာ သူပါလေယာဉ်နဲ့ပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာတယ်၊ ကျနော် တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊
ဒီနေ့ကတော့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ၁၃ရက်၊ သောကြာနေ့ပါပဲ၊ ထီသမားတွေကတော့ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ထီထိုး ရမယ်တဲ့၊ မကောင်းတာနှစ်ခု အချင်းချင်း ကြေပြီး ကံကောင်းစေတတ် လို့-တဲ့၊ ကဲ... မိတ်ဆွေတို့ကော.... Are you paraskevidekatriaphobic?
၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၀၉
ကိုးကား။ ။ www.guardian.co.uk, www.independent.co.uk, http://edition.cnn.com
Posted by ညီလင်းသစ် au 13.3.097comments
I wnoder if you can raed tihs shrot messgae? There are olny 55 presons out of 100 who are albe to raed. If you can raed, tihs cnofrims the resaerch mdae in univrestiy of Cambridge. Accrodnig to it, the lettre odrer is not improtnat becusae huamn brian raeds the whloe wrod and not ecah lettre. The olny improtnat thnig is taht the frist and lsat lettre msut be at the corrcet poistion.
ကျနော့်ဆီကို အထက်ပါစာပိုဒ်မျိုးဆန်ဆန် အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ပြင်သစ်မေးလ်တစ်စောင် ရောက်လာတယ်၊ ကျနော် ဖတ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင်တာနဲ့ အပေါ်ကစာပိုဒ်လေးကို ချရေးကြည့် လိုက်တယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဖတ်လို့ရပါသလား?
( မြန်မာလိုလည်း ကျနော်ရေးကြည့်သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မြန်မာစာက letter တွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ word ဖွဲ့စည်း ပုံမျိုး မဟုတ်တော့ ဖတ်လို့မလွယ်ပါဘူး )
Posted by ညီလင်းသစ် au 12.3.099comments
Canon 450d, Canon EF-S 18-55mm, 53mm, f/5.6, 1/2000, ISO400
Canon 450d, Canon EF-S 18-55mm, 55mm, F/13, 1/320, ISO400
Canon 450d, Canon EF-S 18-55mm, 42mm, f/5.6, 1/400, ISO100
ရိုက်ချင်တာကတော့ macro lens နဲ့ပါပဲ၊ ကိုယ့်မှာ မရှိသေးတော့လည်း ရှိတာလေးနဲ့ပဲ တတ်နိုင်သလောက် macro effect ရအောင် ကြိုးစားပြီး ရိုက်ပါတယ်၊ ပန်းချစ်သူတွေ ရှိနေသရွေ့ ပန်းတွေရှိနေမှာပါ၊ ပန်းချစ်သူတွေကလည်း ပွင့်သောပန်းတိုင်း လှစေချင်မှာ အသေအချာပါပဲ...။
Posted by ညီလင်းသစ် au 10.3.095comments
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.3.099comments